EWFM – CTUM
Published by ctum at August 21, 2017
ကွန်ပျူတာသင်တန်းကို 19.8.2017 19မှ25ရက်နေအထိ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း ရန်ကုန်ကျောင်းတိုက် ကျောက်တံခါးမြို့ တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CTUM မှ ကွန်ပျူတာ သင်တန်း ဆရာမ ဒေါ်မိုးသန္တာစိုး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း တိုင်းဥက္ကဌ ဦးအောင်ကျော်စိုးမိုး နှင့် သင်တန်းသူ/သား .ဆရာ/ဆရာမများ စုစုပေါင်း ၁၁ ဦး ဖြင့် […]
Published by ctum at May 6, 2017
Basic Computer training and Basic English training for our EWFM member from Magwe Region.
Basic Computer training and Basic English training for our EWFM member from Magwe Region. မကွေးတိုင်း၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်ရှိ ပညာရေးကဏ္ဍရှိ ဘ.က ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများအား အခြေခံကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းနှင့် အခြေခံ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ (၂၇)ရက်နေ့မှ […]
Published by ctum at May 5, 2017
Basic Teachers’ Training for Music and Note Reading Course
Basic Teachers’ Training for Music and Note Reading Course ဆရာ ဆရာမများအတွက် အခြေခံတူရိယာသင်ကြားနည်းနှင့် ဂီတသင်္ကေတဖတ်နည်း သင်တန်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ(၁)ရက် မှ (၅)ရက်နေ့ထိ ဂီတသံစဉ်အား လေ့လာခြင်း၊ တူရိယာများ အသုံးပြုနည်း၊ ဂီတာသင်ကြားနည်း လေ့လာခြင်းနှင့် ကလေးများနှင့်လက်တွေ့သရုပ်ပြသင်ကြားခြင်း […]
Published by ctum at April 25, 2017
Pauk Township Monastic Teachers Computer Training
Pauk Township Monastic Teachers Computer Training Magwe Region 2017 April 21-27 မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CTUM နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆရာ၊ ဆရာမများသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် Education International တို့ ပူးပေါင်းကာ မကွေးတိုင်း၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ မင်္ဂလာရာမ ဘုန်းတော်ကြီးတွင် ဘ.ကကျောင်း (၅)ကျောင်းမှ […]